Eksodho 16 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Vanhu vanogunun’una nezvezvekudya (1-3)
Jehovha anonzwa kugunun’una kwevanhu (4-12)
Vanhu vanopiwa zvihuta nemana (13-21)
Hapana mana inowanika paSabata (22-30)
Imwe mana inochengetwa kuti ive chiyeuchidzo (31-36)
16 Pavakabva paErimu, ungano yese yevaIsraeri yakazosvika kurenje reSini,+ riri pakati peErimu neSinai, pazuva rechi15 remwedzi wechipiri vabuda munyika yeIjipiti. 2 Ungano yese yevaIsraeri yakabva yatanga kugunun’unira Mozisi naAroni murenje.+ 3 VaIsraeri vairamba vachiti kwavari: “Dai takanga taurayirwa hedu munyika yeIjipiti neruoko rwaJehovha, patainge tigere pedyo nehari dzenyama,+ tichidya zvekudya tichiguta. Iye zvino makatiunza kurenje kuno kuti muuraye ungano yese iyi nenzara.”+ 4 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Ndava kukunayisirai chingwa chinobva kudenga,+ uye mumwe nemumwe anofanira kubuda kuti anounganidza zvinomukwanira zuva nezuva,+ kuti ndivaedze ndione kana vachizofamba mumutemo wangu kana kuti kwete.+ 5 Asi pazuva rechitanhatu+ pavanenge vachigadzira zvavanenge vaunganidza, zvinofanira kupeta kaviri zvavagara vachinhonga mamwe mazuva.”+ 6 Saka Mozisi naAroni vakati kuvaIsraeri vese: “Manheru muchanyatsoziva kuti Jehovha ndiye akakubudisai munyika yeIjipiti.+ 7 Mangwanani muchaona kubwinya kwaJehovha, nekuti Jehovha anzwa kugunun’una kwamuri kumuitira. Tiri vanaani kuti mugunun’une kwatiri?” 8 Mozisi akaenderera mberi achiti: “Jehovha paachakupai nyama yekuti mudye manheru uye mangwanani okupai chingwa kuti mudye mugute, muchaona kuti Jehovha anzwa kugunun’una kwamuri kumuitira. Asi isu tiri vanaani? Hamusi kugunun’unira isu, asi Jehovha.”+ 9 Mozisi akabva ati kuna Aroni: “Udza ungano yese yevaIsraeri kuti, ‘Swederai pamberi paJehovha, nekuti anzwa kugunun’una kwenyu.’”+ 10 Aroni achangopedza kutaura neungano yese yevaIsraeri, vakatendeuka, vakatarisa kurenje, vakaona kubwinya kwaJehovha kuri mugore.+ 11 Jehovha akataurazve naMozisi, achiti: 12 “Ndanzwa kugunun’una kwevaIsraeri.+ Vaudze kuti, ‘Panguva yerubvunzavaeni* muchadya nyama, uye mangwanani muchadya chingwa kusvika maguta,+ uye muchanyatsoziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu.’”+ 13 Saka manheru iwayo zvihuta zvakatanga kuuya,+ zvikafukidza musasa, uye mangwanani dova rakanga rakafukidza pasi mumusasa wacho wese. 14 Dova racho parakaoma, murenje maiva nezvinhu zvakatsetseka zvinopfupfunyuka+ zvakaita sechando chakachena pasi. 15 VaIsraeri pavakazviona, vakatanga kubvunzana vachiti, “Chii ichi?” nekuti vakanga vasingazivi kuti chaiva chii. Mozisi akati kwavari: “Chingwa chamapiwa naJehovha kuti mudye.+ 16 Uyu ndiwo murayiro wapiwa naJehovha, ‘Mumwe nemumwe anofanira kuunganidza maererano nezvaanokwanisa kudya. Munofanira kunhonga zvinoenderana neuwandu hwevanhu vari mutende renyu, munhu mumwe nemumwe achiwana* omeri*+ imwe chete.’” 17 VaIsraeri vakatanga kuita izvozvo; vakazviunganidza, vamwe zvakawanda uye vamwe zvishoma. 18 Pavaizozviyera neomeri, uya ainge aunganidza zvakawanda aisava nezvakawandisa uye uya ainge aunganidza zvishoma aiva nezvaimukwanira.+ Mumwe nemumwe aizviunganidza maererano nezvaaikwanisa kudya. 19 Mozisi akabva ati kwavari: “Hapana anofanira kusiya zvimwe kusvikira mangwanani.”+ 20 Asi havana kuteerera Mozisi. Vamwe vanhu pavaizvisiya kusvikira mangwanani, zvaiita honye zvonhuhwa, uye Mozisi akavatsamwira. 21 Mangwanani ega ega, mumwe nemumwe ainhonga zvinoenderana nezvaaikwanisa kudya. Zuva paraipisa, zvainyunguduka. 22 Pazuva rechitanhatu vakanhonga chingwa chakapetwa kaviri,+ zviyero zviviri zveomeri pamunhu. Saka machinda ese eungano akauya akaudza Mozisi nezvazvo. 23 Iye akabva ati kwavari: “Ndizvo zvataurwa naJehovha. Mangwana richange riri zuva rekuzorora zvakakwana,* sabata dzvene rinoitirwa Jehovha.+ Kanyai mubike zvamunoda kubika, uye fashaidzai zvamunoda kufashaidza;+ mochengeta zvinenge zvasara kusvikira mangwana.” 24 Saka vakazvichengeta kusvikira mangwanani acho, sezvakanga zvataurwa naMozisi, uye hazvina kunhuhwa kana kuita honye. 25 Mozisi akabva ati: “Zvidyei nhasi, nekuti nhasi isabata rinoitirwa Jehovha. Nhasi hamuzozviwani pasi. 26 Muchazvinhonga kwemazuva matanhatu, asi pazuva rechinomwe, zuva reSabata,+ zvichange zvisipo.” 27 Asi vamwe vanhu vakabuda kunozvinhonga pazuva rechinomwe, asi havana chavakawana. 28 Saka Jehovha akati kuna Mozisi: “Mucharamba musingachengeti mirayiro yangu nemitemo yangu kusvikira riini?+ 29 Onai kuti Jehovha akupai Sabata.+ Ndokusaka ari kukupai chingwa chemazuva maviri pazuva rechitanhatu. Munhu wese anofanira kuramba ari paari; hapana anofanira kubva panzvimbo yake pazuva rechinomwe.” 30 Saka vanhu vakachengeta Sabata* pazuva rechinomwe.+ 31 Imba yaIsraeri yakatumidza chingwa chacho kuti “mana.”* Chakanga chakachena semhodzi dzekoriyanda, uye chainaka semakeke akatetepa ane uchi.+ 32 Mozisi akabva ati: “Jehovha arayira kuti, ‘Zadzai chiyero cheomeri nayo kuti ive chinhu chichachengetwa kwezvizvarwa zvenyu zvese,+ kuti vaone chingwa chandakaita kuti mudye murenje pandakanga ndichikubudisai munyika yeIjipiti.’” 33 Saka Mozisi akati kuna Aroni: “Tora chirongo uise omeri imwe chete yemana, uiise pamberi paJehovha kuti ive chinhu chichachengetwa kwezvizvarwa zvenyu zvese.”+ 34 Aroni akabva aiisa pamberi peChipupuriro+ kuti ichengetwe, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 35 VaIsraeri vakadya mana kwemakore 40,+ kusvikira vasvika kunyika yaigarwa nevanhu.+ Vakadya mana kusvikira vasvika kumuganhu wenyika yeKenani.+ 36 Omeri inopinda kagumi muefa.*
^ Kana kuti “mweya mumwe nemumwe uchiwana.”
^ Uwandu hwaizadza mudziyo wemarita 2,2. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kana kuti “rekuchengeta sabata.”
^ Kana kuti “vanhu vakazorora.”
^ Zvichida rakabva pashoko rechiHebheru rinoreva kuti “Chii ichi?”